Yini ukukhanya? Esikhathini esidlule empeleni nanibheka ukuguquka komsebenzi woMoya oNgcwele njengokukhanya. Kunokukhanya kwangempela ngazo zonke izikhathi, okuhlanganisa ukuthola kwenu lokho uNkulunkulu ayikho ngokuthi nisondele Kimi futhi nihlanganyele Nami; ukuba nokuqonda amazwi kaNkulunkulu kanye nokubamba intando kaNkulunkulu emazwini Akhe—okungukuthi, ngesikhathi nidla futhi niphuza, nizwa uMoya wamazwi kaNkulunkulu futhi namukela amazwi kaNkulunkulu kini ngaphakathi; ukuthola lokho ayikho ngesikhathi nithola futhi namukela ukukhanyiselwa uNkulunkulu ngesikhathi nixoxa Naye, futhi nikhanyiselwa futhi niba nokuqonda okusha amazwi kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi lapho nizindla futhi nicabanga. Uma uqonda izwi likaNkulunkulu futhi uzwa ukukhanya okusha, khona-ke ngeke yini ube namandla enkonzweni yakho? Nikhathazeka ngempela enkonzweni yenu! Lokho kungenxa yokuthi anikafinyeleli kokungokoqobo, aninalo ulwazi noma ukuqonda kwangempela. Ukube ubunokuqonda kwangempela, ingabe ubungeke yini uyazi indlela yokukhonza? Lapho ezinye izinto zikwehlela, kufanele uzizwe ngenkuthalo. Uma, esimweni esilula nesikahle, ungaphila futhi ekukhanyeni kobuso bukaNkulunkulu, khona-ke uzobona ubuso bukaNkulunkulu nsuku zonke. Uma ubone ubuso bukaNkulunkulu futhi waxoxa noNkulunkulu, ngeke yini ube nokukhanya? Awungeni kokungokoqobo, futhi uhlala ufuna ngaphandle; ngenxa yalokho awutholi lutho futhi intuthuko yakho ekuphileni iyabambezeleka.
Ungagxili kokungaphandle; uma nje usondela kuNkulunkulu ongaphakathi, uxoxa ngokujule ngokwanele, futhi uzwa intando kaNkulunkulu, khona-ke ngeke yini ube nendlela ekusebenzeni kwakho? Nidinga ukunaka ngenkuthalo futhi ulalele. Uma nenza zonke izinto ngokuvumelana namazwi Ami futhi ningene ezindleleni engizishoyo, khona-ke ngeke yini nibe nendlela? Uma uthola indlela yokungena kokungokoqobo, khona-ke uyoba futhi nendlela yokukhonza uNkulunkulu. Kulula! Woza ngokwengeziwe ebukhoneni bukaNkulunkulu, zindla ngamazwi kaNkulunkulu ngokwengeziwe, futhi uzokuthola lokho okuntulayo. Uyoba futhi nokuqonda okusha, ukukhanyiselwa okusha, futhi ube nokukhanya.